IZenkit: Lawula iMisebenzi kwiiQela lonke, izixhobo kunye neenkampani | Martech Zone
Ukusukela oko ukuvalwa kweWunderlist kwenziwa ngokusemthethweni, abasebenzisi abaninzi bebefuna ngokungxamisekileyo enye indlela. Amawaka sele ebonakalisile ukuphoxeka kwezi zinto zangoku, yiyo loo nto uZenkit ethathe isigqibo sokuphuhlisa Zenkit yokwenza ke abasebenzisi beWunderlist banokuziva besekhaya. Ayisiyongxaki ukuba ii -apps zabo kunye ne-interface enobuchule ziyafana neWunderlist.
Ii -apps zanamhlanje ziluluhlu olulula (njenge Wunderlist, Todoist, okanye MS yokwenza) okanye izixhobo zolawulo lweprojekthi ezineembono ezininzi (ezinje nge Qhubeka or JIRA). Inyani yile, nangona kunjalo, ukuba iintlobo ezahlukeneyo zabasebenzi zifuna iintlobo ezahlukeneyo zezixhobo. Unokwenza njani ukuba usetyenziso olunye lube nakho konke?
IZenkit isungula iZenkit To Do, i-app yabo entsha yolawulo lomsebenzi, ngaphambi kokuba iWunderlist iyekwe ngomhla we-6 kaMeyi, 2020.
IZenkit To-Do idityaniswa neZenkit:
I-Zenkit (ilula kakhulu) yokwenza izinto idityaniswe ngokupheleleyo neqonga lasekuqaleni leZenkit. Ke ukusukela ngoku ukuya phambili, ungasebenza kwimisebenzi yakho kwi-do-do app okanye usebenzise izimvo ezinobunkunkqele njengeKhanban kunye neetshathi zeGantt. Akukho kungqamanisa, akukho ngeniso, akukho ngxaki! Zonke iiapps zabelana ngevenkile enye yedatha. Oku kunokudibanisa abantu abavela kumanqanaba ahlukeneyo kunye, abaphathi ngokujonga iiprojekthi zabo kumalungu eqela ngemisebenzi abayenzayo.
Iimpawu zeZenkit kunye neZenkit Plus zibandakanya:
Ukulandelwa komsebenzi - Bukela imisebenzi njengoko isenzeka. Jonga yonke into eyenzekayo kumaqela akho, kwiiqoqo, kunye nakwizinto ezizodwa.
Ulawulo oluPhambili Sebenzisa i-SAML esekwe kwi-SSO, lawula abasebenzisi ngokubonelela, kunye nokubeka iliso kunye nokuphicotha imisebenzi yomsebenzisi kunye nemibutho.
Amanqaku -Bona ulungelelwaniso lwalo naliphi na inani lenkundla nakweyiphi na imbono yokujonga ngokukhawuleza idatha yakho.
Nika imisebenzi -Yabela imisebenzi ngokulula ngokwabela amalungu eqela lakho. Bazise ngokukhawuleza ukuba umsebenzi omtsha ufuna ingqalelo yabo.
Izenzo ezininzi Yongeza, susa, okanye ubeke endaweni yexabiso layo nayiphi na intsimi kwizinto ezininzi. Ungaze uphinde unamathele kungenisa idatha edinisayo kwakhona!
Ukuvumelanisa iKhalenda - Ungaze uphuthelwe elinye idinga! Ukudityaniswa kweKhalenda kaGoogle yeZenkit kuthetha ukuba iikhalenda zakho zihlala zingqamene.
Iincwadi zokuHlola -Ufuna indlela ekhawulezayo yokulandela umkhondo wemisebenzi engezantsi? Sebenzisa uluhlu lokutshekisha! Landa inkqubela phambili ngokubonakalayo kwaye uphawule izinto njengoko zenziwe.
Bambisana -Mema oogxa bakho, usapho kunye nabahlobo ukuba basebenzisane kunye nawe kwiiprojekthi zakho.
Izinto ezinemibala -Yenza izinto zakho zivelele ngokuzifaka umbala. Yahlula ngokulula phakathi kwemisebenzi ngemibala egqamile, eqaqambileyo
izimvo -Sebenzisana neqela lakho kwizimvo, ukuze umsebenzi kunye nengxoxo yakho zihlale zixhunyiwe. Ngaba wenze impazamo? Hlela izimvo ukuze wonke umntu abe nolwazi oluchanekileyo.
Imvelaphi yesiNtu Yenza i-Zenkit ngokwezifiso ukuze ihambelane neqela lakho. Yongeza imvelaphi yakho kunye nemifanekiso ngohlaziyo kwiZenkit Plus.
Iiapps zeDesktop Inkqubo entle engenasiphazamiso kwi-macOS, Windows kunye neLinux. Yongeza ngokukhawuleza imisebenzi, vula izikrini ezininzi, kwaye uhlale unemveliso ngaphandle kweintanethi.
Yitsale uyiwise -Ngokucwangcisiweyo ulungelelanise iiprojekthi zakho kwaye uhambise izinto kunye njengoko uqhubeka ngokurhuqa kwaye ulahle.
Imeyile kuqokelelo -Mthumela umsebenzi kuZenkit ngokuthe ngqo kwaye unike imisebenzi ngedilesi ye-imeyile eyahlukileyo. Yenza izinto ezintsha kwibhokisi yakho engenayo.
balithandayo -Udinga indlela yokulandela umkhondo wezinto kwiakhawunti yakho kwindawo enye? Baphawule njengeyona nto uyithandayo ukuze ukwazi ukufikelela kuyo ngokukhawuleza.
Ukwabelana ngefayile - Sebenzani kunye. Yabelana ngamaxwebhu kunye nemifanekiso kwi-desktop yakho, okanye kwiinkonzo zakho ozithandayo zokugcina ilifu.
isihluzo -Qhuba ngokukhawuleza ukufumana eyona nto uyikhangelayo usebenzisa iifilitha zeZenkit ezinamandla. Gcina iifilitha ezisetyenziswa rhoqo ukwenza umbono wesiko.
Iifomula -Yila iifomyula usebenzisa naliphi na icandelo lamanani okanye isalathiso ukunxibelelana, ukudibanisa kunye nokuhlalutya idatha kuyo nayiphi na ingqokelela.
Isitifiketi seGantt - Ishedyuli kunye nokulandela iiprojekthi ezintsonkothileyo kumda wexesha ocacileyo, kunye nokushiyeka kunye nokukhokelela, amanyathelo, indlela ebalulekileyo, kunye nokuninzi!
Ikhalenda yeHlabathi - Ukwenza iiprojekthi ezininzi? Ngaba ufuna indlela yokulandela imisebenzi kunye neziganeko kuyo yonke ingqokelela? Ngamanye amaxesha ufuna nje ukubona yonke into endaweni enye. Ngena "kwiKhalenda yam".
UPhando lweHlabathi -Ufuna ukufikelela kwinto ngokukhawuleza? Ufuna ukukhangela kwizinto ezigciniweyo? Uphendlo lwehlabathi lonke lunokufumana nantoni ngemizuzwana.
iilebhile -Iinkalo zelebheli zeZenkit ziguquguqukayo ngokwaneleyo ukuba zihlele izinto, zinike kuqala, zilandele inkqubela phambili, nokunye okuninzi. Cwangcisa iibhodi zakho zeKhanban ngayo nayiphi na intsimi yeelebheli oyenzileyo.
ikhankanya -Ufuna ukwazisa kwangoko amanye amalungu eqela malunga nohlaziyo olubalulekileyo? Sebenzisa @mentions ukubabonisa oogxa bakho kwaye uzise amalungu eqela afanelekileyo kwingxoxo.
Mobile Apps -Sebenzisa iZenkit ekuhambeni! Akukho qhagamshelo? Akukho ngxaki. IZenkit ye-iOS kunye ne-Android ixhasa umsebenzi ngaphandle kweintanethi kwaye iya kuvumelanisa xa uqhagamshele kwakhona.
Izaziso -Vumela izaziso zincede kunokuba zikuphazamise. Yenza izaziso zakho ngokwezifiso ukuze ufumane ulwazi oludingayo, nini kwaye uyifuna phi.
Izinto eziqhubekayo - Ngaba unemisebenzi oyiphindayo kwiveki nganye okanye kwinyanga nganye? Misela umsebenzi ophindaphindiweyo ukuze ungaze uphoswe lidinga.
Ucaphulo -Qhagamshela ingqokelela yokwenza isiseko sedatha esinobuhlobo esisebenziseka ngokulula njengoluhlu lwezinto eziza kwenziwa. Unamandla ngakumbi kunekhonkco nje, izingqinisiso zigcina idatha yakho ingqamene.
Ukuhlelwa kokubhaliweyo okutyebileyo -Umhleli wombhalo osisityebi olula weZenkit ukuvumela ukuba wenze isicatshulwa esihle ukuphucula umsebenzi wakho. Sebenzisa i-HTML, uphawu lokumakisha, okanye isicatshulwa esisiseko ukwenza ukuba amagama akho avele.
ezimfutshane -Yongeza ngokukhawuleza izinto, uhambise amasebe emephu yengqondo, yongeza iilebheli, nokunye okuninzi ngeendlela ezimfutshane zeZenkit.
Imisebenzi engezantsi -Yongeza ii-subtasks ngemihla efanelekileyo, abasebenzisi ababelweyo, nangaphezulu, kuyo nayiphi na into.
Tshintsha izimvo -Qela ibhodi yakho yeKhanban ngayo nayiphi na ileyibhile kuluhlu nakwimiqolo. Yenza imatriki ephambili okanye ulandele inkqubela phambili yelungu.
Imisebenzi yeqela -Ibhokisi engenayo yeqela lakho. Indawo enye yokujonga zonke izinto ezabelwe wena okanye nawuphina umntu osebenzisana naye. Yenza kwaye unike ngokuzenzekelayo izinto kwiqela lakho ngaphandle kokulahleka kwiiprojekthi ezinzima.
Iqela le Wiki -Yila kwaye upapashe i-wiki entle, enomxholo-osisityebi ngamaxesha. Sebenzisana ngexesha lokwenyani kunye namalungu ee-wiki.
itemplates -Awuqinisekanga ukuba ungaqala ngaphi? Thatha igqabi kwincwadi yeengcali kwaye ukhuphele enye yeetemplate zethu ezilungele ishishini.
Uluhlu lokwenza -Jika nayiphi na iprojekthi ibe luhlu lwezinto oza kuzenza kwaye ubhabhe ngemisebenzi yakho! Phawula imisebenzi njengoko uyenzile kwaye ubabukele behla uluhlu.
Ubungqina boBini-Factor -Qiniseka ukuba iakhawunti yakho ikhuselekile ngokuqinisekiswa kwezinto ezimbini. Iyafumaneka kubo bonke abasebenzisi beZenkit.
Iindima zoMsebenzisi Nika iindima kubasebenzisi ukomeleza ukhuseleko lomsebenzi wakho kunye nokukhuthaza imveliso yeqela lakho.
Sebenza ngaphandle kweintanethi Sebenzisa iZenkit ekuhambeni, nokuba unonxibelelwano lwe-intanethi okanye akunjalo! Imowudi engasebenziyo ikwaxhaswa kuhlobo lwewebhu
Zapier -Dibanisa ngaphezulu kwe-750 yeeapps zakho ozithandayo kunye neenkonzo ngokudityaniswa kukaZenkit's Zapier. Incwadi yeZap
tags: Jiraulawulo lomsebenziukwenzauluhlu lokwenzatodoistkuluhluzenkit
Kutheni imicimbi yeSantya seWebhusayithi kunye neendlela ezi-5 zokuYandisa
Meyi 6, 2012 kwi-6: 06 PM
Enkosi Douglas, andizange ndifumane iWunderlist phambi kweposi yakho. Kufuneka ndifumanise ngakumbi! Ngaba uya kuba wenza isithuba sokulandela kwi-app yefowuni? Ndingathanda ukwazi ngakumbi!